Lianhuaqingwen wuxuu ku dhaqaajiyaa falalka anti-viral iyo anti-inflammatory anti-virus-ka cusub (SARS-CoV-2) - Medicinerawmaterials.com
Lianhuaqingwen wuxuu ku dhaqaajiyaa waxqabadka anti-viral iyo anti-bararka kahortaga coronavirus-ka cusub (SARS-CoV-2)
Cilmi-baaristii ugu dambeysay ee ay sameeyeen kooxda Zhong Nanshan, oo ah aqoonyahan ka tirsan Akadeemiyadda Shiinaha ee Injineernimada, ayaa aaminsan in Lianhua Qingwen ay muujineyso anti-cusub coronavirus-ka tijaabooyinka vitro-ka. Febraayo 2020 Lianhua Qingwen Kaabsoosha (Qaybaha) waxaa lagu soo daray "Barnaamijka Coronavirus ee Cudurka Sambabka iyo Daaweynta Cudurka Sambabka (Nuqulkii Lixaad)" ee Komishanka Caafimaadka Qaranka
Warqadda la xiriirta waxaa cinwaan looga dhigay "Lianhuaqingwen wuxuu ka hortagayaa fayraska iyo ficil-celinta anti-bararka ee ka dhanka ah sheeko coronavirus (SARS-CoV-2)", oo ay ansixisay Joornaalka (Cilmi-baarista Farmashiyaha) ee la aqbalay. Warqaddu waxay xustay in Lianhua Qingwen ay leedahay saameyn ballaaran oo ka hortagga fayraska iyo tallaalka ah oo ku saabsan fayrasyo ​​isdaba-joog ah oo hargab ah oo loo qoro daawo dhaqameedka Shiinaha. Lianhua Qingwen ayaa si weyn u xakameysey taranka SARS-COV-2, saameyn ku yeeshay qaabdhismeedka fayraska iyo waxqabadka anti-bararka ee ku jira fitamiinada. Tani waxay muujineysaa in Lianhua Qingwen ay iska caabin karto weerarada virus-ka waxaana la filayaa inuu noqdo istiraatiijiyad cusub oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19.
Waxyaabaha ugu weyn:
Forsythia, honeysuckle, ephedra, yicib qadhaadh la shiilay, gypsum, Radix, Radix, Houttuynia cordata, patchouli, patchouli, rhubarb, Rhodiola, menthol, licorice Excipients: istaariji
Cudurka oof-wareenka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' wuxuu ka tirsan yahay qaybta cudurka faafa ee TCM. Malabku wuxuu macaan yahay oo qabow yahay, wuxuuna leeyahay taariikh saddex kun oo sano oo ah ka hortag iyo daweynta faafa. Ilaa waqtiyadii hore, waxay ahayd xulashada koowaad ee cudurrada faafa ee waaweyn. Cilmi baaris casri ah ayaa cadeysay in honeysuckle uu leeyahay saameyn ballaaran oo ka hortaga fayraska.
Kooxda Professor Zhang Chenyu ee Jaamacadda Nanjing waxay ogaadeen in miRNA ee hodanka ku ah soosaarka honeysuckle ay leedahay awood lagu bartilmaameedsado lagana hortago coronaviruses cusub, taas oo loo isticmaali karo kahortaga hore iyo daaweynta coronaviruses cusub. Daraasadihii xigay waxay muujiyeen in MIR2911 ee honeysuckle ay leedahay goobo lagu xidho hiddo-wadayaal fara badan oo fayras ah sida fayraska Ebola, fayraska Zika, fayraska doofaarka ee Afrika, Bariga dhexe ee fayraska qandhada faayraska iyo porcine rotavirus, oo xakameyn kara soo-saarka fayrasyadan.
Daawada loo yaqaan 'forsythia' ee ka kooban maaddooyinka ayaa leh saamaynta nadiifinta kuleylka iyo suntan, yareynta bararka iyo dabacsanaanta, waxaana loo yiqiin "dawada barakaysan ee nabarrada" ilaa waqtiyadii hore. Forsythia suspensa sidoo kale waxay leedahay saameyn ballaaran oo bakteeriyada looga hortago. Forsythia phenol iyo saliida kacsan ayaa ah qeybaha ugu muhiimsan ee howlaheeda ka hortaga bakteeriyada, gaar ahaan waxay saameyn xoog leh ku yeelataa bakteeriyada cudurada kala duwan sida Staphylococcus aureus, Pneumococcus, dysentery bacillus kala duwan; Soosaarida Forsythia suspensa sidoo kale waxay leedahay saameyn xaddidan oo ka hortag ah fayraska Coxsackie B iyo fayraska infalawansada, iyo sidoo kale saameynta anti-bararka iyo antipyretic.
Houttuynia cordata waa daawo dhaqameed Shiino ah oo inta badan la isticmaalo oo leh shaqooyinka nadiifinta kuleylka iyo sunta sunta, baabi'inta carbuncle iyo malaxda oo la sifeeyo, iyo kaadi sifeynta diuretic. Waxaa loo isticmaali karaa sambabka sanbabka (sambabka sambabada), xabad xanuun, qufac iyo malax iyo dhiig, qufac kuleylka sambabka, xaakada iyo qi, iyo sunta kuleylka Suga carbuncle, qoyaan kuleylka, iwm.
Cilmi-baaris casri ah ayaa caddeysay in Houttuynia cordata ay leedahay firfircooni wanaagsan oo ka hortagga bararka waxaana loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo infekshannada mareenka neef mareenka; tijaabooyin xayawaan ah ayaa muujiyey in saliida lagama maarmaanka ah ee loo yaqaan 'Houttuynia cordata oil' ay saameyn xoog leh ku yeelato fayraska dureyga. Si kastaba ha noqotee, hadda ma jirto caddayn sugan, gaar ahaan ma jiraan tijaabooyin caafimaad oo lagu caddeeyo in Houttuynia cordata ay saameyn ka hortag ah ku leedahay cudurka 2019-nCoV ee daran ee neef-mareenka (oof-wareenka cusub ee coronavirus).
Banlangen waxay leedahay saameynta nadiifinta kuleylka iyo sunta sunta, qaboojinta dhiigga, oo ku habboon cudurada kuleylka sida qabowga-kuleylka qabow, cuna xanuun iyo wixii la mid ah, waxayna leedahay saameyn anti-virus-ka ah. Si kastaba ha noqotee, coronavirus-ka cusub wuxuu inta badan ku saleysan yahay sharka qoyan, sidaa darteed marka laga eego dhinaca daawada, isatis kuma haboona kahortaga hore, mana jirto cadeyn cad oo muujineysa in isatis uu waxtar u leeyahay kahortaga coronaviruses cusub.
Diammonium glycyrrhizinate waa soosaarida liisanka dawada dhaqameed ee Shiinaha. Qaab dhismeedkeeda molekuleed wuxuu la mid yahay hormoonnada isteeroydhiska. Waxay kordhin kartaa waxqabadka gulukooska 'endogenous and exogenous glucocorticoids', waxay xakameyn kartaa jawaabaha difaaca jirka ee xad-dhaafka ah, sidoo kale waxay ilaalin kartaa beerka. Waxay xakamayn kartaa jawaab celinta jirka ee xad-dhaafka ah iyo dhaawaca beerka ee uu keeno coronavirus-ka cusub.
Si wax ku ool ah looga hortago dhacdada cudurka sambabka ee cusub, waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato inaad u baxdo meelaha dadku ku badan yahay. Isla mar ahaantaana, waa inaad fiiro gaar ah u yeelato nadaafadda qofka, inaad si joogto ah u dhaqdaa gacmahaaga, xiro maaskaro, isticmaal hindhiso ama qufac si aad afkaaga iyo sankaaga ugu daboosho unugyo ama xusullada, isla mar ahaantaana, ka fogow taabashada iyo Soonka xayawaanka duurjoogta ah. Haddii aad leedahay qandho, qufac iyo astaamo kale, waa inaad feejignaataa, aadna qaadataa go'doominno wanaagsan iyo tallaabooyin ka hortag ah, isla markaana aaddaa rugta qandhada si loogu daweeyo.